Ukubaluleka kokuVunywa kokuThengiswa | Martech Zone
Ngelixa itekhnoloji yokuvumela ukuthengisa ibonakalisiwe ukuba iyonyusa ingeniso ngama-66%, I-93% yeenkampani kusafuneka zenze iqonga lokunika amandla ukuthengisa. Oku kuhlala kungenxa yeentsomi zentengiso ezinokubangela ukuba kubize, kunzima ukuhambisa kunye nokuba namanqanaba okwamkelwa asezantsi. Ngaphambi kokuntywila kwizibonelelo zeqonga lokunika amandla intengiso kunye nento eyenzayo, masiqale ngokuntywila ekubeni yeyiphi intengiso kunye nokuba kutheni kubalulekile.
Yintoni ukuVumela ukuThengisa?
Ngokwe-Forrester Consulting, ukuthengiswa kwentengiso kuchazwa njenge:
Inkqubo eqhubekayo, exhobisayo exhobisa bonke abasebenzi abajongana nabathengi ngobuchule bokuhlala bencokola ngendlela efanelekileyo kunye neseti elungileyo yabathathi-nxaxheba kwinqanaba ngalinye lomjikelo wobomi wokusombulula ingxaki kumthengi ukwandisa ukubuya kotyalo mali kwintengiso inkqubo.
Yintoni u "Vumelo lokuThengisa" kwaye uForrester waya njani malunga nokuYichaza?
Ke oko kuthetha ntoni?
Ukuba ucinga ngentengiso yakho kwimeko yomjikelo wentsimbi, cinga ukuhambisa abathengisi bakho abaphakathi ukusuka ezantsi kwebloko yentsimbi ukuya phezulu kunye nabadlali bakho abaphezulu. Injongo yokunika amandla ukuthengisa kukuhambisa umndilili wabathengisi ukusuka ezantsi uye phezulu ukuze baqalise ukuthengisa njengomphathi ophezulu. Kubathengisi bakho abatsha okanye abaqhelekileyo, kunokwenzeka ukuba abanalo ulwazi okanye charisma yokuphumeza intetho-esekwe kwiintengiso ezenziwa ngabadlali bakho abaphambili ngomthengi ngamnye. Ukuba netekhnoloji yokuthengisa efanelekileyo yokuthengisa endaweni ivumela abathengisi bakho abatsha nabaphakathi ukuba babone ukuba yintoni esebenzisana nabathengisi abaphezulu ukunceda ukuphakamisa intengiso yabo. EMediafly, sikubiza oku ngendaleko yombutho wentengiso, uVenkile wokuThengisa ™.
Kutheni ufuna ukuXhotyiswa kokuThengisa?
Ukubeka nje, abathengi batshintshile. Ixhomekeke ku I-70% yolwazi abathengi be-B2B abayibonayo bayazifumanisa kwi-Intanethi, abangayinikwanga ngumthengisi wentengiso. Xa umthengi enxibelelana nomthengisi, ulindelo luphezulu. Abafuni ukuva isandi malunga neempawu zomsebenzi kunye nemisebenzi. Endaweni yoko, bafuna amava abo kunye nawokuthenga, ebavumela ukuba baqonde ukuba yeyiphi imiceli mngeni kwimveliso okanye kwinkonzo oyisombululayo kunye nendlela eya kubanceda bafezekise iinjongo zabo zemali.
Ngolu tshintsho kwindlela yokuziphatha komthengi, abathengisi kufuneka bagqithe kwinkcazo emileyo yePowerPoint. Endaweni yoko, kufuneka babenetekhnoloji ukuze bakwazi ukuhamba-hamba kwindawo leyo, babonelele ngolwazi lwexesha lokwenyani lokwakha ukuthembana nomthengi wabo kwaye ekugqibeleni, bavale isivumelwano. Itekhnoloji yokuvumela intengiso yenza kanye loo nto.
NgokukaForbes, izisombululo zokunika amandla ukuthengisa lolona tyalo-mali luphezulu lwetekhnoloji yokunyusa imveliso yokuthengisa. Ingxelo yedatha ibonisa ukuba I-59% yeenkampani egqithileyo ekujoliswe kuko kwingeniso- kunye ne-72% ebagqithileyo nge-25% okanye nangaphezulu- banomsebenzi ochaziweyo wokuvumela ukuthengisa.
Yintoni ekufuneka uyenzile kwiQonga lokuXhobisa ukuThengisa?
Ngelixa kukho amandla amaninzi kwiqonga lokunika amandla ukuthengisa, thina, e Imediafly, kholelwa ukuba iqonga lokuthengisa elisebenzayo kufuneka libonelele abathengisi ngezi zinto zilandelayo:
Ukukwazi ukufumana ngokulula umxholo ofanelekileyo, okhoyo ngoku kubandakanya iividiyo, izixhobo ezisebenzisanayo, izilayidi zokusetyenziswa kwincoko nabathengi
Ukukwazi ukukhawulezisa incoko kwintengiso ukuhlangabezana neemfuno zomthengi ngqo, ukudala amava awodwa kunye awodwa kumthengi
Izixhobo ezisebenzisanayo kubandakanya i-ROI, i-TCO kunye nezixhobo zokubala ezithengisa ixabiso, kunye nemicwangcisi yemveliso, ukufaka igalelo kumthengi ukunceda ukukhokela iingxoxo zentengiso
Isakhono sokutsala idatha yexesha lokwenyani kwimithombo eyahlukeneyo, ukunceda ukujongana nemiceli mngeni eyahlukileyo yomthengi
Idatha kunye nohlalutyo lwendlela umxholo osebenza ngayo, ulwazi oluthile oluqhutywa ngumthengi ukuqhubela phambili ukuthengisa kunye nokuqonda ukuba umxholo uphuculwa njani kwintengiso kwaye usetyenziswa ngamathemba
Umdibaniso neCRM ukunceda ukwenza imizamo yokulandelela umyalezo wokulandela kunye nezixhobo zokubhekisa ezisetyenziswe kwiintlanganiso ezidlulileyo
Obu buchule buseta abathengi nakweliphi na inqanaba ukuya empumelelweni. Ngelishwa, itekhnoloji yokuvumela ukuthengisa ihlala ibonwa njengebizayo, inzima kwaye inobungozi. Kodwa akufuneki ibenjalo. Onke amaqela athengisayo okanye imibutho yokuthengisa ikuluhambo lwabo lokuvumela ukuthengisa Ngaphandle kohambo olunye ngokufanayo, imibutho kufuneka ithathe ixesha lokusebenza nomnikezeli wabo wokuthengisa ukwenza iqonga elikhethekileyo ngokukodwa kwiimfuno zombutho wabo.
Kungekudala, Imediafly fumanaiiPresent ebomvu ukunceda ukubonelela ngentengiso kubo bonke. Ngale nto siyifumanayo, siyakwazi ukuhambisa esona sisombululo sibanzi kwaye sithengise ukuthengisa kumashishini abo nabuphi na ubungakanani, sisuse indleko zeshishini kunye nokuphunyezwa kwezithintelo kwiinkampani ezininzi ziziva zoyikisiwe xa zithenga itekhnoloji yokuvumela intengiso.
Ukuba wenza ingxoxo ngokuthenga itekhnoloji yokunika amandla ukuthengisa kodwa uxhalabile ngokumiliselwa, ukuzibophelela kwexesha, njl. thatha amanyathelo amancinci usiya kwinjongo yakho. Njalo khumbula ukuba olu luhambo. Ngokubandakanya itekhnoloji yokuthengisa yokuvumela, ungayeka ukubukela abathengisi bakho abanzima bezama ukufikelela kwiinjongo zabo kwaye, jonga iqela lakho lokuthengisa liphumelele.
tags: ukusebenza komxholoukudityaniswa kwekramImithombo yeendabaiziqulatho zemvelisoumxholo wentengisointsebenzo yomxholo wentengisoiingxoxo zentengisoUkunika amandla ukuthengisa
Iindlela ezi-4 zeQhinga loPhuculo loMxholo wakho oBonakalayo ngo-2020